Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbax Caalami ah oo 26 July lagu taageerayo Ilaalinta Xuquuqda Dastuuriga ah ee Muslimiinta Itobiya
Banaanbax Caalami ah oo 26 July lagu taageerayo Ilaalinta Xuquuqda Dastuuriga ah ee Muslimiinta Itobiya
WASHINGTON– Xukuukmadda Itobiya ayaa kula dhaqanto Muslimiinta Itobiya oo ah kala badh shacabka Itobiya siyaabo ka baxsan Cahdiga Caalamiga ah ee qeexaya Xoriyadda Aaminada iyo Diimaha. Waxay Xukuumadda Itobiya cadaadis xoogan saartay dadka Muslimiinta ah iyadoo la xusay qodobada soo socda;
1-Waxay Libnaan ka keensatay madhabada (Al-Axbaash) oo aan laga aqoonin Itobiya kuwaasoo iska dhiga inay yihiin Muslimiin hasa ahaatee Caqiidada Islaamka ee dadka muslimiinta ah ay aaminsan yihiin ka soo horjeeda.
2- Waxay adeegsatay Xukuumadda xoog si ay dadka muslimiinta ah ugu qasabto inay qaataan madhabkaa.
3- Waxay Xukuumadda ku faafinaysaa Itobiya si aan sharci ahayn madhabkaa Al-Axbaash iyadoo la adeegsanayo Golaha Sare ee Muslimiinta Itobiya oo loo doortay si aan sharci ahayn.
4- Iyadoo xukun aan Sharciga waafaqsanayn lala tiigsaday daweynihii muslimiinta ahaa ee ka dhiidhiyay arintaa, qaarkoodna si qarsoodi ah loo dilay.
Arimahaa aan soo xusnay ayaa dhamaantood ka soo horjeeda Miithaaqa Qaramada Midoobay iyo waliba Dastuurka u qoran Itobiya. Inkastoo kooxdan Al-Axbaash ay xaq u leeyihiin hadday doonaan inay la noolaadan dadka Itobiya iyagoo aaminsan waxay rabaan, laakiin waxaan loo dul qaadan karin in dadweynaha lagu qasbo inay qaataan madhabadaa diinta islaamka ka soo horjeeda iyadoo la adeegsanayo lacagaha faraha badan ee Libnaan laga keenay. Arintaana waxay ka soo horjeedaa Xoriyadda Diimaha iyo Aaminaada.
Siyaabahaa daraadood ayaan loogu dulqaadan karin qorshaha ay Xukuumadda wadato ee la doonayo in caqiiqdada Muslimiinta Itobiya iyo Kunka sano soo jirtay lagu badalo fikardaa dhunsan ee Al-Axbaash.
Waxaa laga codsanayaa dhamaan shucuubta Caalamaka ee jecel xoriyadda inay kala soo qaybgalaan shacabka Itobiya banaabaxa maalintaa looga soo horjeedo xadgudubka ay Xukuumadda Itobiya ku hayso dadka Muslimiinta ah ee Itobiya.
Halkan ka akhriso dheeraad : http://quatero.net/archives/24072